You nwere ike mezue ihe niile dị na eBook a n'okpuru € / $ / £ 100 na-echeta na ka ị na-emekwu onwe gị na ọ ga-efu ya n'ihe gbasara ego - ntinye ego gị ga-abụ oge.
Otu okwu ịdọ aka na ntị! Thingsrụ ihe onwe gị nwere ike ịdị ka nhọrọ dị ọnụ ala mana ị ga-echetarịrị mgbe niile na oge gị nwere oke ego, kwa elekere ọ bụla ị dị ndụ n'ihi na ị na-akwụ ego maka ụlọ, ụlọ ọrụ na maka mkpa mmadụ dị ka iri nri!
Ịkwesịrị ịkọ ọnụ ole ọ na-efu maka awa ọ bụla nke oge gị maka ị ga-adịrịrị adị, mgbe ahụ tụlee ego nke iji ọkachamara nwere ike rụchaa ọrụ ahụ n'ogo nke oge ọ ga-ewe gị mee.
Nke a bụ nhọrọ ị họọrọ, na m bụ onye na-enwe mmasị ịghọta nzọụkwụ ọ bụla n'onwe gị, ma ị kwesịrị ịkwado ego ị na-ahọrọ mgbe ị na-ekpebi ma ị ga-arụ ọrụ ahụ n'onwe gị, rụọ ọrụ na ọkachamara ma ọ bụ nweta ọrụ ahụ kpamkpam ma tinye oge gị ihe ndị ị na-enwe mmasị na na ebe ị nwere ike ịgbakwunye ọnụ ahịa kachasị.
Ị nwere ike ịgụ akwụkwọ a n'ihe dị ka otu awa ma mezue ihe niile i mere na ihe na-erughị otu ụbọchị ma ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya n'ịmecha ọ bụla. Ọ bụ ezie na ị ghaghị icheta ụlọ ahụ na ijikwa ebe nrụọrụ weebụ, tinyere mgbasa ozi ọha mmadụ, bụ usoro na-aga n'ihu na-adịghị agwụ agwụ.
Nke a eBook na-akọwa otu esi etinye ngwa ngwa ịtọ ntọala nke azụmahịa azụmaahịa n'ịntanetị.
Ekwenyere m n’ezie na ọ bụrụ na ị mee ihe dị mfe ma dịkwa ngwa ị ga - ahụ nsonaazụ dị mma n’ime ụbọchị ma ọ bụ izu ole na ole, mana, anaghị m atụ aro ka ị hapụ ego ị na-akpata ugbu a ruo mgbe ị ga-ahụ ahịa azụmahịa gị n'ịntanetị na-emepụta ego niile ịchọrọ iji bie. ruo ọtụtụ ọnwa.
Ị ga-enwe nnukwu ego ọzọ n'oge mbụ.
Ọ bụrụ n’inwe mkpebi ịme azụmahịa gị n'ịntanetị dabere na mkpa ego dị ngwa ngwa ị ga-achọpụta na mkpebi gị abụghị nke atumatu, yabụ ego ị ga - enweta nwere ike ịbụ obere oge, ị ga - ejikwa ị nweta ego ọhụrụ oge niile - nke a bụ nke ọma dị ka ịrụ ọrụ maka onye ọzọ!
Ighari uzo di nkpa ka anabata dika ‘ihe ndozi ngwa ngwa’ na ikekwe uzo ichikota ego na ngwa oru ighoro iji wuo ahia gi ma buru n’uche na ikwesiri iwulite ezigbo ahia iji bie ogologo.
Otu uru dị mkpa dị n'ịrụ azụmahịa na ntanetị bụ na ị na-etinye ọtụtụ ọrụ na mbido, ozugbo ọ na-arụ ọrụ nke ọma ị na-arụ ọrụ zuru ezu iji nọgide na-akpata ego, mana ị dịghị ewughachi sistemụ ahụ site na ọkọlọtọ oge ọ bụla. .
Ọ Ga - ekwe omume 'M' ịmepụta Businesszụ ahịa Ntanetị?
EE !!!! Ndị ọgbọ, agbụrụ, ọnọdụ, mba na ike niile na-emepụta obere, ego na nnukwu ego online, ma ọ bụrụ na ndị ọzọ nwere ike ime ya ị nwere ike ime ya!
Mee ihe kwa ụbọchị ọbụlagodi na ọ bụ ihe pere mpe, ntigbu mgbe niile bụ isi ya, ike agwụkwala gị. Mee ihe, mehie ihe, mụta ihe site na ha ma mee mgbanwe ndị dị mkpa - A na - akpọ ya 'AKADKỌ - ỌF - - AIM'.